Liverpool vs Arsenal - BBC News Somali
15 Agoosto 2010
Kooxaha Liverpool iyo Arsenal ayaa ciyaartoodu ay bilaabanaysa lixda maqribnimo ee saacadda Africada bari.
Labadan koox waxay ka mid yihiin kooxaha ugu cad cad horyaalka England. Waxaa la filayaa in ciyaar xiiso leh ay dhexmari doonto, taasoo laga dheehan doono sida mid walbaa uu isugu diyaariyay tartanka, iyadoo Liverpool tartankii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay aysan ka galin meelihii looga bartay ee afarta kore, balse ay noqotay kooxda gashay kaalinta 7-aad.
Liverpool waxaa shaki laga qabaa ciyaaryahankooda Torres oo dhaawac ahaa, iyadoo sidoo kale uu dhaawac ku maqnaanaya Skrtel oo anqawga ka dhaawacan.
Dhinaca Arsenal waxaa shaki ku jiraa in ay ciyaari karaan Denilson, Diaby iyo Song oo dhaawac horay u qabay iyo sidoo kale Fabregas iyo van Persie oo loo malaynayo in aysan wali jir ahaan diyaar ahayn in ay galabta ciyaaraan.
Waxaa dhaawacan Bendtner, Djourou iyo Ramsey.
Waxay labadan koox iska hor yimaadeen 173 jeer. Liverpool waxay ka badisay Arsenal 68 jeer, halka Arsenal-na ay badisay 60 goor, 44 jeer ayayna barbarro noqdeen.
Garonka Liverpool iyo taageerayaasheeda
Liverpool oo kaliya sadex kulan ayay badiyeen 18-kii kulan ee tartanka Permier League oo ay isaga horyimaadeen labadan koox.
Labada koox ee Liverpool iyo Arsenal ciyaarahooda waxaa ka soo baxay shan jeer oo hal ciyaaryahan uu mar kaliya sadex gool dhaliyo, taasoo aan horay uga dhicin ciyaaraha kooxaha kale dhex mara.
Hadii Liverpool ay badiso, waxay u noqonaysaa guusheedii 2000-aad ee tartan kubadda cagta.
Liverpool oo kaliya laba kulan ayay badisay todobadii kulan ee furitaanka ciyaaraha ee ay yeelatay. Sanadkii hore ciyaarteedii furitaanka waxaa 2-1 uga badiyay Tottenham.
Hadii ay badiso Liverpool, tababare Roy Hodgson wuxuu noqonayaa maamulihii ugu horeeyay ee kooxda Liverpool oo tan iyo sanadkii 1892 ay kooxdiisu badiso sadexda kulan ee ugu horaysay ee inta uu koox u macalin u noqdo.
Dhinaca Arsenal, waxay badiyeen sideed ka mid ah sagaal ciayarahooda ugu horeeyay ee furitaanka Premier League.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger
Arsenal waxay goolal badan ka dhalisay bannaanka diilinta sideed iyotobanaad, taasoo aanay samayn koox kale oo ka mid ah kuwa ka qaybgalaya tartanka England Premier League.
Ciyaarahanada labada koox ugu cadcad dhinaca gool dhalinta.
Liverpool, ciyaarayahanka Torres wuxuu dhaliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 22 gool, halka Gerrard uu dhaliyay 12 gool.
Arsenal, Fabregas wuxuu dhaliyay 19 gool, iyadoo Bendtner uu dhaliyay 12 gool.
Gantaalkii hore ee soo dhacay kadib, Shiinaha oo mid kale u diray cirka